I-Pokémon tattoo: bathole bonke! | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
Ngizoba ongcono kakhulu, ongcono kunayo yonke eyake yaba khona. Isizathu sami wukuba umqeqeshi ngemuva kokuhlolwa kwami ​​okukhulu kwangempela. Ngizohamba noma iyiphi indawo, ngizofika noma yiliphi ikhona. Ekugcineni ngizokwazi ukwembula amandla aku-Pokémon.
Uma ubonile ingoma (futhi manje ugxuma njengohlanya) lokhu okuthunyelwe kwakho, kusukela manje Sizobona eminye imibono yokuthola i-Pokémon tattoo, enye yama-franchise adume kakhulu kaNintendo (futhi ungakhathazeki, uma ungaphezu kwalokho ama-mario tattoos sikuphathele okunye okuthunyelwe).
1 Imibono ye-Pokemon tattoo
1.1 Ngakhetha iBulbasaur. Nawe, ukhethe bani?
1.2 Umlingiswa wakho oyintandokazi enawe kuze kube phakade
1.3 Izigcawu ezifanele ukungafi
1.4 Amaphikseli afana namadala
1.5 Ama-Pokéball ajikelezayo futhi amancane azokubamba
2 Amathiphu okwenza i-Pokemon tattoo ikhanye
Imibono ye-Pokemon tattoo
Namuhla siqala ukusebenza ngokushesha ukuze sikunikeze imibono yokwenza i-Pokemon chop yakho ihluke. Sicabanga ukuthi udlale imidlalo yevidiyo noma okungenani ulubonile uchungechunge. Kunoma ikuphi, ingxabano yalaba ababili ingafingqwa ngendlela elula kakhulu: i-Pokémon eqeqeshiwe esemsebenzini ikhetha i-Pokémon yayo yokuqala futhi iphume iyobona umhlaba.
Ngakhetha iBulbasaur. Nawe, ukhethe bani?
Ake siqale ngezisekelo: Wake wacabanga ukwenza i-tattoo ngePokémon oyikhonzile? Isoka lami liyakwenza. Ngalo Khisimusi unginikeze i-tattoo ka-Zelda futhi wazinikeza enye ye-Bulbasaur, i-Pokémon ayintandokazi yakhe, futhi iyathandeka (bobabili; i-Pokémon nesoka lami).
Engifuna ukukusho ukuthi Impela uma ungumlandeli wePokémon usuvele unaso isiphazamisi sakho osithandayo; Kodwa kungaba umqondo othakazelisayo ukuwunikeza i-twist bese ukhetha umklamo oseduze nawe nobuntu bakho. Isibonelo, i-Bulbasaur yesoka lami ilele futhi inamaqabunga e-ginkgo ngemuva kwayo (i-ginkgo isihlahla asithandayo).
Ngokuvamile Abalandeli bePokémon bathanda noma iyiphi i-Pokémon yokuqala yesizukulwane esake yaphila. Ngokuqinisekile inganekwane kunazo zonke, ngokuba ngowokuqala, nguCharmander, udrako othandekayo, i-squirtle, ufudu olubi kanye nohamba phambili emhlabeni, i-Bulbasaur, nakuba kungafanele sikhohlwe ezinye izilo ezincane ukuthi, nakuba bezingezona zokuqala, cishe we-legend futhi lokho kungakunika imibono epholile kakhulu ye-tattoo yokuqala. Ngokwesibonelo:
Jigglypuff, ibhola eliphinki elithandeka kakhulu ... futhi elisindayo. Ipende njengasochungechungeni, imakrofoni nomaka esandleni ulungele ukupenda ubuso bendoda ebukekayo elala ilalele ama-ballads ayo ukuze iguqule okujabulisayo. Eqinisweni, le Pokémon iyinganekwane kangangokuthi ivela kwezinye izitolimende zeminye imidlalo yevidiyo, njengeSuper Smash Bros.
Cubone, iPokémon enomlando odabukisayo nosontekile. Mhlawumbe yingakho kuyi-protagonist yama-tattoos amaningi. Ubuwazi ukuthi ugebhezi olusekhanda lakhe ngolukanina, owashona emvikela ku-Team Rocket? Uchungechunge olufana nolwakudala alusasenziwa...
eevee... noma okunye kokuvela kwayo okuningi kungenye yePokémon ongagqugquzelwa ngayo ukuze uthole i-tattoo epholile. Ungakhetha eyodwa noma ucezu oluningiliziwe olunakho konke ukuvela ndawonye.
Umlingiswa wakho oyintandokazi enawe kuze kube phakade
Iqiniso ekhaya besihlala singuJames kakhulu, weTeam Rocket, ngoba akekho onjengaye owazi ukusizakala ngesiketi. Kodwa-ke, amaqhawe akho asebuntwaneni angase angafaki izinhlaka eziningi zochungechunge njengabanye babaqeqeshi balo abaningi. Phakathi kwezinsumansumane kakhulu, u-Ash, owokuqala kukho konke, onamawala futhi onenkani, kanye noMisty noma u-Brock, abangani bakhe bokuqala.
Uma ufuna okuthile okukhethekile, Ungakhetha umqeqeshi wokuzivocavoca onobudlelwane obukhethekile naye noma ngisho noProfessor Oak, okukunikeza ukuthi ukhethe i-Pokémon yakho yokuqala emidlalweni futhi ingeyesibili ochungechungeni.
Izigcawu ezifanele ukungafi
Kuze kube manje sikhulume ngabalingiswa kanye nePokémon, manje singakhuluma ngezigcawu eziye zadlala nokuthi bangaba ucezu olufanele kulabo abafuna i-tattoo enkulu kakhulu.
Isibonelo, enye yezindawo eziyinganekwane nezikhunjulwa kakhulu yi- ILavender Town, enenganekwane yayo yasemadolobheni (noma "i-creepypasta", njengoba intsha yanamuhla isho). Ngokusho kwenganekwane, umculo kaPueblo Lavanda wawunemisindo eholele ekutheni amakhulu abantu azibulale… Ngaphandle kokungabaza indawo okumele uyikhumbule!
I-Las izindawo ezinhle zokubalekela ibhaluni le-Team Rocket's Meowth Zingesinye sezigcawu ezingasebenza kahle ku-tattoo ehlekisayo lapho ama-protagonists kunguJesse noJames futhi, vele, u-Meowth, u-Pikachu wakhe othile. Ihambise ngebhaluni elibhoboziwe elindiza esibhakabhakeni. I-Team Rocket iyasuka futhi!
Futhi-ke, asikwazi ukukhohlwa amakhulu ezimpi zePokémon ezenzekile kulo lonke uchungechunge nemidlalo yevidiyo. Kungakhathaliseki ukuthi ngobuhle be-pixel noma ngokusekelwe ku-anime noma imidlalo yakamuva, kungcono ukhethe i-Pokémon oyikhonzile kanye nezitha zayo, noma enye i-Pokémon oyithanda ngempela. Thatha ithuba lokubakhombisa ngokuhlasela kwabo okudume kakhulu, okufana nesiswebhu se-Bulbasaur strain.
Amaphikseli afana namadala
Kithina esikhule no-Game Boy, i-NES, noma i-SNES, ayikho into ebuhlungu njengamaphikseli. Ungenza amaqhinga wangempela ngalezi zikwele ezincane ezilula kangangokuthi zilingisa umuzwa waleyo midlalo yokuqala. Khumbula ukuthi, nakuba ngombala zikhanya kakhulu, ekuqaleni i-Game Boy yayimnyama nokumhlophe, okunganikeza umdlalo kumdwebo osuselwe kubuhle bangempela be-Pokémon ngaleso sikhathi.
Ama-Pokéball ajikelezayo futhi amancane azokubamba
Uma ungafuni ukwenza i-tattoo noma iyiphi i-Pokémon kodwa ungumuntu othanda i-saga, ungakhetha noma yiziphi ezinye izimpawu zayo, njenge-Pokéballs. Uma uyidlalile imidlalo, usuvele uyazi ukuthi kukhona ama-Pokéball ongawanikeza futhi uwathengise akusiza ukubamba iPokémon enzima kakhulu.
Idizayini ene-Pokéball ingaba mncane futhi ihlakaniphe, ekahle uma ungafuni umklamo omkhulu kakhulu noma ufuna into yokugqoka, isibonelo, esihlakaleni.
Amathiphu okwenza i-Pokemon tattoo ikhanye
Ukuze siqedele, ake sibone amathiphu ambalwa okwenza i-Pokémon tattoo yakho ikhanye futhi ihluke ngokungafani nezinye, into ebalulekile ukuze ungakhathali ngemva kwezinsuku ezimbili zayo:
Sebenzisa ngokugcwele umbala. I-Pokémon, nakuba ekuqaleni kwayo ku-Game Boy ilinganiselwe kokumnyama nokumhlophe, iwuchungechunge lwe-TV kanye ne-franchise ejabulisa kakhulu, kokubili ngesakhiwo sayo nobuhle bayo. Ngakho-ke, ku-tattoo enalesi sihloko, umbala ubalulekile, ukukhanya nokukhanya kungcono. Khumbula, ngokwesibonelo, ukuthi imibala emibili ephikisanayo inganikeza impilo eningi ekwakhiweni, ngokwesibonelo, ukuhlanganisa i-Bulbasaur, eluhlaza ngokuphelele, enemininingwane ebomvu, ewolintshi, ephuzi, epinki ...
Ngaphandle kombala, isitayela se-tattoo sibaluleke kakhulu. Akudingekile ukuthi uhlale ulandela isitayela se-anime noma imidlalo, empeleni, ungathola imiklamo epholile kakhulu enezitayela ezibonakala ziphambene, ezifana nezendabuko noma ze-neoclassical. Kodwa-ke, okugqama kakhulu yikhathuni, evumela ubuhle obuhlanzekile noma obudwetshiwe, obuzoba umklamo ogcwele ukukhanya nokunyakaza.
Ekugcineni, ungakhohlwa ukuthi ukuze uthole umklamo ongowakho ngokuphelele ungakwazi ukwengeza ezinye izakhi ekwakhiweni. Isibonelo, nozakwethu ngamunye sigqoka umlingisi womdlalo wevidiyo oyintandokazi womunye ukuzifihla kwakhe (noma okufanayo, ugqoke isixhumanisi esifihliwe njengeBulbasaur futhi mina ngigqoka i-Bulbasaur efihliwe njengesixhumanisi), nakuba izinketho zingapheli. .
I-Pokémon iyisithonjana sobuntwana bethu ukuthi, kungani kungenjalo, kungaba izaba ezifanele zokuthola i-tattoo Kwangathi ingasigcina ingunaphakade futhi imemeze emhlabeni ukuthi ungumqeqeshi!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Umlingiswa Tattoos » I-Pokémon tattoo: bathole bonke!